Haddii aad qabto su´aal la xidhiidha takooridda, waxa lagugu soo dhawaynayaa, in aad la soo xidhiidho machadka Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsrådgivning.
Tilifon: 32 69 86 66
Latalintu waxa ay furan tahay salaasada ilaa khamiista 10-15 saac.
Faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha machadka Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsrådgivning waxa aad ka akhriyi kartaa bogga intarnetka www.menneskeret.dk.
Haddii aad deggan tahay degmada Kobanheegan waxa aad soo wici kartaa khadka daaran ee tooska ah ee xafiiska latalinta dadwaynaha 80 30 20 20. Halkan waxa aad ka heli kartaa talobixin iyo latalin iyo weliba warar la xidhiidha xuquuqdaada iyo fursada aad ku ashkatoon karto. Faahfaahin dheeraad ah ka akhri boggawww.kk.dk/diskrimination.
Maxkamadda sinaanta waa maxkamad guud oo qaadda dacwadaha la xidhiidha eexda ama sinaan la’aanta ku qeexan sharciyada. cid kasta ayaa u soo dacwoon karta maxkamadda. Haddii aad xubin ka tahay urur shaqaale waxa ku saamaynaya xeerar gaar ah.
Klager over forskelsbehandling, inden for arbejdsmarkedet
Dacwadaha la xidhiidha eexda iyo sinaan la’aanta suuqa shaqada
Maxkamadda sinaantu waxa ay qaadaa kiisas la xidhiidha eexda iyo sinaan la’aanta suuqa shaqada ee ku salaysan jinsi (lab iyo dheddig), sinji, midab, diin ama caqiido, fikirka siyaasadeed, dareenka galmood, da’da, naafada ama isirka qarameed, bulsheed ama qoleed.
Klager over forskelsbehandling, uden for arbejdsmarkedet
Dacwadaha la xidhiidha eexda iyo sinaan la’aanta ee ka baxsan suuqa shaqada
Maxkamadda sinaantu waxa ay qaaddaa kiisas la xidhiidha eexda iyo sinaan la’aanta ee ka baxsan suuqa shaqada.
Go´aamada kiisaska oo lagu saleeyo qoraal
Maxkamada sinaantu waxa ay go´aamada ku qaadataa wararka qoraalka ah ee ka yimaada tusaale ahaan dhibbanaha (mudduciga) iyo dhibgaystaha (mudducu calayhiga), ee xoghayntu soo gudbiso.
Faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha maxkamadda sinaanta ka akhri bogga www.ligebehandlingsnaevnet.dk
Guji si aad u